Cali Khaliif oo ka baxay Buuhoodle iyo dal diyaarad qaas usoo diray - Caasimada Online
Home Warar Cali Khaliif oo ka baxay Buuhoodle iyo dal diyaarad qaas usoo diray
Cali Khaliif oo ka baxay Buuhoodle iyo dal diyaarad qaas usoo diray
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya degmada Buuhoodle ayaa sheegaya in xalay xili dambe uu magaaladaasi isaga baxay madaxweynaha maamulka Khaatum Cali Khaliif Galeyr oo maalmahaan ku sugnaa degmadaasi.
Lama oga sababaha ka dambeeya in Cali Khaliif uu isaga baxaa degmada Buuhoodle, balse muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa degmada ka taagnaa xiisad ka dhalatay safarkii uu ku tagay magaalada Hargeysa.
Wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha Khaatumo uu kusoo jeedo magaalada Laascaano ee gobolka Sool, oo marar badan uu tagay, waxaana la sheegayaa in halkaasi uu u tagayo arimo la xiriira wadahadalka uu kula jiro Somaliland.
Wararka kale ee aan heleyno ayaa sheegaya in Cali Khaliif Galeyr uu ku wajahan yahay magaalada Dubia ee dalka iski taga imaaraatka carabta halkaasi oo wadahadalkii u dambeeyay ay ku yeelanayaan Somaliland iyo Khaatumo.
Wararkii u dambeeyay ayaa sheegaya in Laascaano ay tagi doonto diyaarad qaas ah oo madaxweyne Cali Khaliif ka qaadeysa degmadaasi, iyada oo geyn doonta dalka Imaaraatka Carabta.
Imaaraatka Carabta ayaa xiriir toos ah la sameynaya madaxda maamulada ka jira gudaha dalka Soomaaliya, wuxuuna doonayaa in maamul walbaa uu dantiisa gaar ah ka qabsadaa isagoo aan mareynin dowladda dhexe.